फ्रान्सेली पाखुरामा नेपाली कविता- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
फ्रान्सेली पाखुरामा नेपाली कविता
जेष्ठ १२, २०७५ माधव घिमिरे
काठमाडौँ — भर्खर नेपाल घुमेर आफ्नो देश फर्किएँ । यो भ्रमणले मलाई नेपालप्रति गहिरो प्रेममा पार्‍यो । भ्रमणका बेला मैले अनुभव गरेका कुराहरू फेरि अनुभूत गर्न मन लाग्यो र तिनका बारेका नेपाली कवि वा लेखकहरूले के कसरी लेखेका रहेछन् भनेर खोजें ।
त्यसक्रममा मैले त्यहाँ अनुभूत गरेका सुन्दरताका बारेमा तपाईंका कविताहरूमा प्रचुर मात्रामा व्यक्त भएको पाएँ । म तपाईंको कविताका केही अंश आफ्नो पाखुरामा ट्याटु गर्न चाहन्छु । के तपाईं मलाई कविताका यी अंश नेपाली भाषामा पठाइदिन सक्नुहुन्छ ? त्यसको ट्याटु बनाउन सम्भव हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन तर एकपल्ट कोसिस गर्न चाहन्छु ।’
आफ्नो फेसबुक पेजमा आएको यस्तो सन्देश पढेर कवि सुमन पोखरेल चकित भए । किनभने आफूले कहिल्यै नचिनेको व्यक्तिबाट अचानक अनौठो, यसअघि नभोगेको खाले अनुरोध आएको थियो । सन्देश पठाएकी थिइन्— फ्रान्सको पेरिसकी एन्ड्रिया फर्नान्डिजले ।
पोखरेलको उत्सुकता र एन्ड्रियाको अनुरोधको सिलसिलामै दुवैबीच इमेल मार्फत थप कुराकानी भयो । उनको अनुरोधमा पोखरेलले आफ्ना कविताका उनले चाहेको अंशलाई किताबबाट फोटो खिचेर पठाइदिए । अनि, रंगमञ्च र यस्तै अरू सिर्जनात्मक गतिविधिसँग जोडिएकी, भ्रमणकी सोखिन र ‘कन्टेन्ट प्रोडक्सन’ मा काम गर्ने ३० वर्षीया एन्ड्रियाले आफ्नो दाहिने पाखुरामा ती कवितांशको ट्याटु खोपाउने रहर पूरा गरिन् ।
यो जानकारी पोखरेलबाट पाएपछि थप कुरा बुझ्न चाहँदा उनै मार्फत एन्ड्रियासँग सम्पर्क भयो । नेपाली कविताकै ट्याटु बनाउन किन मन लागेको भन्ने जिज्ञासामा उनले रोचक उत्तर दिइन् ।
आफ्नो पाखुरामा ट्याटुका रूपमा नेपाली कवितांश खोपाउनुपर्ने उनको कारण यस्तो रहेछ :
‘हामी गत अप्रिलदेखि मेको पहिलो हप्तासम्म नेपाल घुम्न आएका थियौं । मेरा प्रेमीको घर फ्रेन्च एल्प्सको नजिकै छ, त्यसैले हिमाली भेगसँग हाम्रो विशेष लगाव छ । लामो हिंडाइपछि शान्त वातावरणमा मन्दमन्द चिसो बतासबाट छोइनु, घमाइलो बिहानलाई ताप्नु र अँगेनाका वरिपरि बसेर आगो ताप्नुजस्ता स–साना चीज जीवनका सबैभन्दा अमूल्य प्राप्ति हुन् । त्यसैले हामी मनास्लु क्षेत्र घुम्नका लागि नेपाल आएका थियौं । हामीले त्यहाँ यथेष्ट मात्रामा त्यस्तै मनमोहक र सौम्य वातावरण अनुभव गर्न पायौं । जाडोले भित्रसम्म छुन्थ्यो, प्रकृति पूर्ण रूपमा प्राकृतिक थियो, जताततै रहस्यमयी सुन्दरताले भरिएको ।
घर फर्किएपछि आफूले त्यहाँ भोगेको आनन्दलाई फेरि अनुभूत गर्नका लागि मलाई नेपालका बारेमा, नेपालका संस्कृतिहरूका बारेमा पढ्न मन लाग्यो र मैले नेपाली कविताहरू खोजें । यस क्रममा मैले एउटा वेबसाइटमा संवेदनाले भरिएका कविताहरू भेट्टाएँ, ती सुमन पोखरलेका रहेछन् । त्यसपछि ती कविता नेपालीमै लेखेर आफ्नो पाखुरामा ट्याटु बनाउने इच्छा लाग्यो र उहाँलाई फेसबुक मार्फत भेटें र सम्पर्क गरें । पहिले त उहाँले ट्याटु बनाउनेजस्तो कुरामा हतार नगर्न र तीभन्दा उपयुक्त अरू पंक्ति खोज्न सल्लाह दिनुभयो । तर, मलाई उहाँका तिनै हरफ उपयुक्त लाग्यो ।’
पोखरेलले पठाइदिएको फोटमो उल्लेख ‘खोरम्पा’ कवितासंग्रहको एउटा अंश अनि ‘व्यस्तता’ कविताको अर्को अंश गरी तीन पंक्ति मिलाएर खोपाएकी छन् । ‘नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको अनुभूति ती कविताले दुरुस्तै व्यक्त गरेको पाएँ’ एन्ड्रियाले म्यासेन्जरमा भनिन्, ‘फरक कविताका अंश भएकाले पछि यी हरफलाई इन्भर्टेड कमाले छुट्याउने विचार गरेकी छु अनि उहाँ (कवि पोखरेल) को हस्ताक्षर पनि खोपाउने विचार छ । हस्ताक्षरको फोटो मागेकी छु ।’
मेला लागिरहेथ्यो कुहिराहरूको
त्यो डाँडा र त्यसको वरिपरि
प्रेम बोकी हिँड्ने बतासका स्पर्श
पाखुरामा खोपिएको ट्याटुमा रहेको यो कवितांशले आफूलाई सधैँ नेपाल अनुभूत गराइरहने उनले बताइन् । ‘यसले अरूलाई पनि मेरो पाखुरामा नेपाल देखाउनेछ भन्ने लागेको छ’ उनले भनिन्, ‘अर्को वर्षतिर फेरि नेपाल घुम्न आउने मन छ, अब आउँदा भिजिट गर्नुपर्नेमा सुमन पोखरेल पनि थपिएका छन् ।’
विराटनगर बसेर कविता र चित्र सिर्जना अनि अनुवाद साहित्यमा सक्रिय पोखरेलको फेसबुकले ‘भेरिफाइड’ गरेको पेजमा आफ्ना रचना र अनूदित रचना प्रकाशित भएका विभिन्न
पत्रिकाका लिंकसमेत समेट्ने गरेका छन् । अंग्रेजी, हिन्दी र उर्दूका राम्रा रचना नेपालीमा अनि नेपाली धेरै रचनाहरू ती भाषामा उनले अनुवाद गरेका छन् । विभिन्न ठाउँमा प्रकाशित उनका अंग्रेजीमा अनूदित कविता मन पराएर नाम चलेका धेरै लेखकले तिनका अंश आफ्नो लेखमा उद्धृत गरेका छन् ।
‘द हिन्दु’ मा प्रकाशित रनिङ अन पोयट्री : द वुन्डेड वल्र्ड शीर्षकको कवितासम्बन्धी लेखमा डा. श्रीविद्या शिवकुमारले पोखरेलको कविता ‘हरेक बिहानबाट’ को अंश उद्धृत गरी लेख सुरु गरेकी छन् । त्यही कविताको अर्को एक अंशबाट सुरु गरेर मीनाक्षी मोहनले मन्ना बहादुरको एउटा पुस्तकको समीक्षा गरेकी छन् । पोखरेलको कविता ‘वर्षात्मा बुद्धको मूर्तिसामु’ को एउटा हरफ उद्धृत गरी अतुला गुप्ताले ‘डेक्कन हेराल्ड’ मा प्रकाशित इन्भाइरोन्मेटल राउन्ड अप शीर्षकको आफनो लेख सुरुआत गरेकी छन् ।
यसैगरी मोना मेहताले ‘स्पिकिङ ट्री’ मा प्रकाशित दक्षिण एसियाली सम्पदासम्बन्धी लेख पोखरेलकै कविता ‘खोजिरहेछु एउटा हृदय’ लाई उद्धृत गरी सुरु गरेकी छन् । यस्तै ‘साइकोलोजी टुडे ‘मा प्रकाशित ‘हु वान्ट्स टु बी नर्मल’ शीर्षकको आफ्नो लेखमा एमेली टी ट्रोस्कियान्कोले पोखरेलको कविता ‘निर्णय गर्नुअघि’ को अन्तिम अंशलाई उद्धृत गरेकी छन् । विभिन्न देशबाट प्रकाशित हुने चर्चित पत्रिका र म्यागेजिनहरूमा पनि पोखरेलका थुप्रै कविता छापिएका छन् ।
नेपाली सर्जकहरू ‘अनलाइन’ मा जान सके उनीहरूका सिर्जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पाठकले पढ्ने र मन पराउने रहेछन् भन्ने उदाहरण देखिएको अग्रज साहित्यकार प्राडा अभि सुवेदीको बुझाइ छ । अनलाइनमा भएका कवितालगायत सिर्जनाहरू अनेक किसिमले प्रयोग गर्नु, सेयर गर्नुले थप पाठकहरूसम्म पुग्न मद्दत हुने उनले बताए ।
जेष्ठ १२, २०७५ आरके अदीप्त गिरी
काठमाडौँ — सन्ध्याकालीन क्षितिजबाट रविले छोडेका अन्तिम किरण बटुलेर राप्ती नदी आफूलाई रंगीन बनाउन अभ्यस्त देखिन्छ । मानौं उसले सूर्यको लाली सुटुक्क चोरेर आफूमा एक बैँसालु उन्माद भर्न जानेको छ । त्यहीँ सूर्यास्तको रङले पोतिएको रातो कोलाजमास्तिरबाट उड्दै जान्छ— लामो आँट भरेका चराहरूको क्याराभान ।
जंगलको फराकिलो छातीमा रमाइरहेका गैँडा, हात्ती, मृग, चित्तल, मयूर र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको पदचापले सौराहा आफँैमा कलात्मक देखिन्छ । दिनभरिजसो जंगल सफारी गरेर ठीक त्यही कोलाजमय सन्ध्याकालमा ‘बास’ बस्न फर्किरहेका आगन्तुकहरूको लर्कन उस्तै विचित्रको लाग्छ ।
यी यावत् दृश्यानुभूतिले तपाईंको मनमा गजबको आनन्द सञ्चार कहीँ हुन्छ भने त्यो सौराहा नै हो । हो, चितवनस्थित सौराहामा सन्ध्याकालीन अनुभूति सँगाल्न तपाईं पुग्नुभो भने जिल्ल पर्नुहुनेछ । मेरो मन पनि यस्तै आनन्दले अभिभूत भएको थियो, पहिलो पटक सौराहा पुग्दा ।
घुमफिर र मनोरञ्जन गर्न चाहने पर्यटकका लागि सौराहा छुटाउनै नहुने गन्तव्य हो । उनीहरूको ‘ट्राभल मेनु’ को अग्रपंक्तिमै पर्छ सौराहा । आजभन्दा ४५ वर्षअघि यहाँ पर्यटनको बीउ रोपिएको थियो । अहिले देश–विदेशमा यसले ठूलो ख्याति कमाइसकेको छ । सम्भावनाका अनेक विम्ब र आयाममा फैलिएको छ— यहाँको भूगोल ।
बसोबासका दृष्टिले चितवन जिल्ला उपयुक्त त छ नै, वन्यजन्तु, थारू संस्कृति र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताका दृष्टिले पनि धनी छ । समय र मौसमसँगै परिवर्तन हुने सौराहाको वातावरण मनोरम छ । हरित वनस्पति, चराचुरुङ्गी र जनावरहरूको उपस्थितिले यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई विशिष्ट अनुभूति प्रदान गर्दछ ।
पर्यटकले हात्ती तथा जिप सफारी गर्दै जङ्गलका दुर्लभ एकसिंगे गैँडा, मृग, बँदेल, बाघ, गोही, जरायोदेखि विभिन्न प्रजातिका दुर्लभ चराहरूको अवलोकन गरेर आनन्द बटुल्न सक्छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु सजिलैसँग अवलोकन गर्न सकिनु यस निकुञ्जको अर्को विशेषता हो ।
घाँटीमा झुन्डिएको क्यामेरा, बाइनकुलर र पिठ्युँमा सानो झोला बोकेका पथप्रदर्शकहरू । यहाँ आउने पर्यटकलाई जंगल सफारी गराउनमा निकै व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूको उत्साह, आँट र साहसले पर्यटकको मनमा बेग्लै ऊर्जा सञ्चार हुन्छ । सजिलैसँग जंगली जनावरको अवलोकन गर्दै प्रकृतिको काखमा हराउन पाउँदा कुन पर्यटकको मन आह्लादित नहोला र ? हेरेर मख्ख पर्छन् र हृदयमा अमिट छाप बोकी ती फर्किन्छन् ।
यहाँ पुग्ने पर्यटकका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैंमा एउटा अर्को संसार हो । जहाँ विविधतामय प्रकृति उनीहरूलाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ । विशेषगरी यहाँ जंगल सफारीमा जान रुचाउने पर्यटक समुद्रपारिबाट आएका ‘पारखी’ हुन्छन् । उनीहरू दिनभर जंगल सफारीका साथै ‘वाक’ गर्छन् । जब साँझ छिप्पिँदै आउँछ, उनीहरूलाई ‘गुँड’ को चटारोले छोप्छ । यसबेला उनीहरूका सामु दुई विकल्प हुन्छन्— पायक पर्ने सुरक्षित स्थानमा टेन्ट–क्याम्प हाल्ने या नजिकको आवास क्षेत्रमा पुग्ने ।
यस्ता जंगल–पारखीहरूको यात्रा एकै दिनमा कहाँ सकिन्छ र ? अर्को दिनको सुरुआतसँगै पुन: सुरु हुन्छ सफारी । यसरी लामो समय दिएर जंगलमा घुमफिर गर्न सोखिन पर्यटकहरूको सोख केवल ‘सफारी’ को आनन्द लिनु मात्र होइन, निकुञ्ज क्षेत्रको प्राकृतिक दृश्यपानका साथै यहाँ पाइने विविध वन्यजन्तुको सूक्ष्म अवलोकन पनि उनीहरूको रुचि हो । जंगल क्षेत्रमा रहेको सिमसार र त्यस क्षेत्रमा बस्ने जलचरहरू— घडियाल गोही, कछुवाजस्ता प्राणीको पनि अवलोकन गर्न ती छुटाउँदैनन् ।
उनीहरूको अवलोकन जंगलमा मात्रै सीमित हुँदैन । कतिपय पर्यटकको रोजाइमा जंगल आसपासका बस्तीहरू पनि पर्छन् । आसपासका आदिवासी बस्तीको रहनसहन, परम्परा, संस्कृति र लवाइखवाइ या भनौं समग्र जीवनशैलीप्रति उनीहरू बडो चाख दिएका हुन्छन् ।
हाल निकुञ्ज आसपासका कसरा, वनकट्टा, मेघौली, घडगाई, अमलटारी, कुजौली, पटिहानी आदि क्षेत्रहरूमा पर्यटकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहने गरेको छ । निकुञ्ज प्रवेश गर्ने झन्डै ७५ प्रतिशत पर्यटकको गन्तव्य भने सौराहा नै हुने गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सौराहा घुम्न आउने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ जंगल सफारी नै हुने गर्छ । सफारीका लागि बिहान र अपराह्नको समय उत्तम मानिन्छ । हात्ती र जिप दुवैले जंगलको भित्री क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउँछन् । साथै डुंगा मार्फत राप्ती नदीमा जलयात्राको आनन्द लिन पनि सकिन्छ । स्वदेशी पर्यटक हात्ती सफारी गर्न बढी रुचाउँछन् । विदेशी पर्यटकचाहिँ ‘जंगल वाक’, ‘बर्ड वाचिङ’, ‘डुंगा सयर’ गर्ने चाहना राख्ने गरेको सौराहाका पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । एकै क्षेत्रमा अनेक किसिमले मनोरञ्जन तथा अवलोकनको सुविधा प्राप्त हुने भएर पनि पर्यटकहरू सौराहातिर ओइरिरहन्छन् ।
एक दशक अघिसम्म यहाँ खरले छाएका स–साना ‘छाप्रा–होटल’ हरू थिए । पछिल्लो समय चेतना र प्रविधिको विकाससँगै यहाँ हाल टिपिकल नेपाली ‘होमस्टे’ देखि सुविधासम्पन्न आधुनिक होटल तथा रिसोर्टहरू खुलेका छन् र यो क्रमले तीव्रता पाएको छ । व्यवसायीहरू पर्यटकलाई सेवा र मनोरञ्जन दिन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै लागिपरेका छन् ।
सौराहामा वर्षैभरि घुम्न सकिन्छ । यद्यपि असोजदेखि पुस र फागुनदेखि असारसम्मको सिजन यहाँ घुम्नका लागि रमणीय मानिन्छ ।